IVATO 19 Febroary 2011 | GAZETY_ADALADALA
IVATO 19 Febroary 2011
Posted on 19/02/2011 by gazetyavylavitra
Vao maraina dia efa nisy ny nitanjozotra nankeny Ivato, nentanin’ny fanantenana hahita ny filoha teo aloha ho tonga eto Madagasikara. Rakotra vahoaka be tokoa ny teny amin’ny manodidina rehefa niha nanakaiky ny ora voatondro.
Nanamarika ity famoriam-bahoaka androany ity ny tsy nahitàna hoe iza no lohan’ny hetsika. Raha tsy efa tamin’ny 03 ora latsaka tsy nipoitra teny ry Emmanuel Rakotovahiny, Zafy Albert, Manandafy, ‘Satrobory’, Ramisandrazana, sy ny namany. Toy ny hoe efa nahafantatra mialoha fa tsy hisy hotsenaina, fa mba miala sarona fotsiny sisa. Ny fampielezam-peo sasany rahateo efa tamin’ny 10 ora maraina no efa nilaza fa tsy isan’ny olona tafiditra tao anaty fiaramanidina avy any Juhanesbourg ingahy Ravalomanana sy ny fianakaviany, araka ny loharanom-baovao marim-pototra voarainy (saingy tsy nambaran’iretsy mpitarika ny hetsika tamin’ireo vahoaka marobe mihitsy izany).
Tototra olona an’aliny maro tokoa ireo làlana rehetra mitondra mankany amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, satria manomboka hatrany amin’ny HORIZON IVATO ka hatrany amin’ny Sampanana ambony mivoaka avy any an-tseranana raha hihazo ny faritr’i Fitrohafana iny, tsy nisy azo nodiavina. Sahirana tokoa ireo fiara nivoaka avy ao an-tseranana, na ireo izay ho any hitsena vahiny.
Henjana ny fisavana teo am-pidirana: karapanondro, entana, fiara, moto, samy tsy nisy afa-bela. Afaka nifamezivezy malalaka ihany kosa anefa ireo efa fantatra fa ‘Navette’, na fiaran’ny ADEMA, na koa an’ireo Hotely lehibe eto an-drenivohitra.
Zavatra vitsivitsy nahavaka saina no ho tsipihako manokana ato anatin’ity lahatsoratra ity
1* nasaina nankeny an-toerana ny vahoaka, saingy tsy tazana teny ny mpitarika, hatramin’ny naha maizina ny andro (Mamy Rakotoarivelo). Ry Zafy Albert sy Manandafy ary Emmanuel Rakotovahiny aza dia tsy sahy niatrika vahoaka mba nilaza tamin’izy ireo fa tsy ho avy ilay nandrasana ka tokony hiparitaka hody ampilaminana ny rehetra.
Fanavaozam-baovao 20/02 (RnM): Vaovao av amin’ny RnM no nahenoana fa nanao lahateny hampody ny olona i Mamy Rakotoarivelo ny Sabotsy 19/02/2011 nanodidina ny tamin’ny 5 ora hariva tany ho any
2* nafampàna ny fankahalàna mpanao gazety androany teny Ivato. Maromaro no tafara-dia tamiko tany anaty vahoaka tany, nidina ho amin’iny sampanana mankany y amin’ny Croc Farm iny. Nandeha ny rahom-bava sy ny sotasota. Tonga hatramin’ny fangaronana paosy, ary saika niafara hatramin’ny fikasihan-tànana. Niharan’izany ny namana iray avy ao amin’ny MaTV raha tsy nanaovako hevitra am-pitaka mba hisintonana azy hiala teo anivon’ireo olona efa nifanasa vangy sy nihodidina azy. Soa fa mba voarainy ny tanan’ilay vehivavy nangarona ny paosiny, ka tafaverina soa aman-tsara ny portefeuille-ny.
3* asa loatra izay tena antony fa tamin’ireto vahoaka nankahala mpanao gazety androany ireto dia tafiditra tao anaty lisitry ny lasibatr’izy ireo ny TV Plus sy MaTV androany. Somary nahagaga ahy ihany ity farany satria tsy an’iza fa an’ny fianakavian’i Mamy Rakotoarivelo. Inona no antony? Sa noho ity fahitalavitra ity nolazaina fa namoaka ny hoe tsy tao anaty lisitry ny mpandeha amin’ilay fiaramanidina (vaovao reny tamin’ny RFI) ry Ravalomanana mianakavy sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky? Notondroina fa mpamafy lainga daholo mantsy ireo mpaka sary sy mpanao gazety izay sendra azy ireo, ka sarotsarotra ihany ny nitadiavana làlana hilefana raha sanatria ka nisy ny kalao kalao.
4* tsy nety nifampiresaka tamin’ireo vahoaka tonga teny ireto mpitarika fa nisokosoko mangina niala ny toerana rehefa avy niseho tamin’ny mpanao gazety sy niandry ny fahatongavan’i Maitre Hanitra, mpisolo vava an’ingahy Ravalomanana. Zareo mitaingina ny 4 x 4, fa ireto vahoaka miandry vasoka tsy mahalala na inona na inona kosa handeha tongotra rehefa maizina ny andro. Ingahy Zafy Albert koa tsy nivoaka ny fiara nisy azy mihitsy.
5* tsy nety niresaka avy hatrany tamin’ny mpanao gazety Malagasy i Maitre Hanitra fa rehefa avy nivoaka ny fiara nisy azy dia namantana avy hatrany tao anatin’ny fiara nisy an’ingahy Zafy Albert. Avy eo dia tsy nety niresaka tamin’ireo mpanao gazety Malagasy marobe fa nampitady ilay vehivavy teratany vahiny mpanao gazety niaraka taminy efa hatrany anatin’ilay fiara nitondra azy niditra ny seranana rahateo. Nisy mpanao gazety Malagasy roa ihany anefa tafasisika afaka nahazo resaka nandritra izany.
6* Isan’izay sorena aho nahita ilay fihetsika nanavaka ny mpanao gazety sy mpaka sary Malagasy ary tsy nahatsindry fa niteny hoe:
Fa ho an’iza moa ny hafatra voalohany tokony hampitaina? Tsy ho an’ny Malagasy va re?
Deraina etoana ny firaisan-kinan’ireo mpaka sary sy mpanao gazety nandre io fanavahana io ka niara-nientana nihataka tsy handre akory izay nolazainy sy tsy nihontsona intsony tamin’izay ho tohiny tao. Miala tsiny anefa ny tena fa nitady lava-boalavo ihany ka tafasisika hatrany anaty fiaran’ingahy Zafy Albert ihany ny tànana sy ny fitaovana, saingy toy ny mibitsibitsika ny fomba firesaka tao ka mila manongilan-tsofina tsara vao mandre izay nifampiresahan-dry zareo tao anaty fiara. Aleo dia tsorina fa be no tsy re tsara e! Rehefa vita izay noresahana tao anaty fiara vao nivoaka i Maitre Hanitra niresaka tamin’ireo ambina mpanao gazety sisa nanodidina azy teo.
7* nisy vazaha lahy iray nanaiky noraisim-peo teo rehefa avy nandeha tamin’ilay zotram-piaramanidina. Nahita ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ilehio ary nandre ny zavatra rehetra nolazain’ity farany tamin’ny mpanao gazety tany Juhanesbourg rehefa tsy afaka nandray ny sidina ho aty Madagasikara.
8* Nidehadehaka ery i Pasitera Edouard niteny tamin’ireo rehetra nanoloana azy fa tsy maintsy tonga amin’ity andro ity ary tsy hamitaka an’ireto vahoaka marobe tonga teo Ivato ireo i Marc Ravalomanana. Ny rehetra manotany azy anefa amin’io efa tapitra mahalala fa tsy tafakatra tao anaty fiaramanidina ny olona andrasan’ny maro. Mba vaovao taiza re no loharano narahany e?. Vita moa izay teny fohy nataony izay dia nasain’ny mpitandro filaminana niala ny toerana izy.
Manomboka eto dia hampakatra tsikelikely ny sary sy foe ho anao ny Gazety_Adaladala koa manaova ‘Refresh’ matetitetika fa arakaraky ny hiakaran’ny lahatsary ao amin’ny Youtube no ipetrahan’ny rohy etoana koa.
Ireo olna eny amin’ny làlana midina mankany amin’ny seranam-piaramanidina:
Eo mabny kelin’ny vavahady fidirana mankany amin’ny seranana:
Resaka niarahana tamin’ingahy Emmanuel Rakotovahiny:
Resaka nifanaovan’ilay mpanao gazety vahiny niaraka tamin’i Maitre Hanitra tamin’ireo olona naneho ny tsy hafaliany:
Mbola resaka tamin’ingahy Emmanuel Rakotovahiny indray:
Pasitera Edouard mbola tsy mety mino fa ho tsara petraka ny rehetra, na dia efa dila ela aza ny ora nomena. Ireo mpitarika tonga talohany anefa efa nitady lalam-poza hijaikojaikoana hody:
Ilay resaka nataon’i Maitre Hanitra tao anaty fiaran’ingahy ZAFY Albert, ary nanilihana ny mpanao gazety Malagasy ka niteraka fahasorenana ho an’ireto farany:
Resaka nifanaovana tamin’ingahy Peter Sullivan, seraseran-dRavalomanana:
Resaka nataon’i Maitre Hanitra rehefa noheveriny fa tonga ny fotoana tokony hanomezana haja ny mpanao gazety Malagasy sisa nanaiky handray feo azy:
Azonao tsidihana ihany koa ny kaonty Flickr raha sary tsotra fotsiny no hojerena.
Filed under: fiaraha-monina, fifandraisana iraisam-pirenena, politika, tapatapany | Tagged: ADEMA, Croc Farm, Emmanuel Rakotovahiny, HORIZON IVato, Ivato, Maitre Hanitra, Mamy RAKOTOARIVELO, MaTV, Pasitera Edouard, Peter Sullivan, Ramisandrazana, Ravalomanana, Satrobory, Tv Plus, zafy albert |
« Itaosy: Fiarovan-tenan’ny fianakaviamben’ny polisy…mahatsikaiky Loza namoizana aina 6 teny amin’ny RN 2 »
horakoraka, on 19/02/2011 at 11:30 said:
Merci pour tes remarques et merci également pour les photos.